M5 Note - အကျဉ်းချုပ် - Meizu
ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ ပိုမိုလှပမှု
Meizu M5 Note ကို သတ္တုနှင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ရှန်ပိန်ရွှေရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အပြာနှင့် ငွေရောင်တို့ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ M5 Note ပေါ်ရှိ ဧရိယာတိုင် အသစ်သည် အခြား M စီးရီးများထက်ပိုမို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပြီး စတိုင်ကျ ခေတ်မီလှပစေပါသည်။ အဆင့် 12 ဆင့် ဖြင့် အချောသတ် ပြီးသော M5 Note သည်လက်ထဲတွင် ဂုဏ်ယူကောင်းမွန်စွာ ကိုင်ဆောင်ထားနိုင်မည့် ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းပါသည်။ M5 Note ၏ အသံစနစ်သည် ထူးခြားကောင်းမွန် တိကျသော CNC မှတစ်ဆင့် အသံကိုထုတ်လွှတ်ပေးသောကြောင့် ပိုမိုညီမျှကောင်းမွန် သဘာဝကျသော အသံကို ထုတ်ပေးပါသည်။
ဖုန်းမျက်နှာပြင် 5.5 လက်မဖြစ်ပြီး
မျက်စိ ကာကွယ်ပေးသည့်စနစ် ပါရှိသည်
5.5 လက်မဖြင့် HD အပြည့် ပြသပေးနိုင်သည့် ဖုန်းမျက်နှာပြင်ဖြင့် M5 Note သည် မျက်စိကာကွယ်ပေးသည့် စနစ်မှတစ်ဆင့် မျက်လုံးနာကျင်ထိခိုက်မှုကို လျှော့ချပေးပြီ ပိုမို အရောင်အသွေးစုံလင်သော၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ပုံရိပ်နှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော မြင်ကွင်းကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်စေပါသည်။ 2.5D ဖန်သားပြင်ကို သုံးပြီး ကွေးထားသော အနားသတ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် M5 Note ကို သုံးစွဲရခြင်းသည် ကောင်းမွန် စစ်မှန်သော ခံစားမှုပင်ဖြစ်သည်။
4GB မြန်နှုန်းရှိသည့် RAM
M5 Note တွင် နောက်ဆုံးပေါ် 64-bit octa- ore processor ပါဝင်ပြီး အမြင့်ဆုံး 1.8GHz ကြိ်မ်နှုန်းအထိ ပေးပို့ နိုင်သည်။ RAM 3GB သို့မဟုတ် 4GB RAM ပါရှိပြီး 16GB သို့မဟုတ် 32GB သို့မဟုတ် 64GB ဟူ၍ သိမ်းဆည်းနိုင်သည့် ပမာဏကို ရွေးချယ်နိုင်သည့်အတွက် အမျိုးမျိုးသော သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
8.1mm ပါးလွှာသောသော်လည်း M5 Note တွင် လုံလောက်သော 4000mAh ရှိ ဘတ်ထရီပါရှိသည်။ အကောင်းဆုံး ဘတ်ထရီနည်းပညာကို သုံးစွဲထားပြီး ဈေးနှုန်းအတန်းတူဖုန်းများနှင့် ယှဉ်ပါက အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
M5 Note သည် နောက်ဆုံးပေါ် အမြန်အားသွင်းနိုင်သော နည်းပညာကို သုံးထားပါသည်။ 18W စွမ်းအား အခံရှိပြီး Meizu M5 Note ကို အားသွင်းရန် မိနစ် 90 ခန့်သာ ကြာမြင့်ပြီး ၎င်းသည် အရင် ဖုန်းများထက် 40% ပိုမိုမြန်ဆန်ပါသည်။
ဖြင့် အချိန်တိုင်းကို ရိုက်ကူးပေးသည်
M5 Note ၏ နောက်ကင်မရာသည် 13 megapixel CMOS အာရုံခံကိရိယာကို အသုံးပြုထားပြီး ဓာတ်ပုံဆုံချက်အတွက် 0.2 စက္ကန့်သာကြာမြင့်ပြီး လက်တစ်ဖက်တည်းဖြင့် ဗီဒီယိုနှင့် ကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပုံများကို ချောမောစွာ ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ M5 Note ၏ ရှေ့ကင်မရာသည်5megapixel ပါရှိပြီး သင့်ဆဲလ်ဖီပုံများကို အလှခြယ်ရန် အလှမုဒ်တစ်ခု ပါရှိသည်။
M5 Note တွင် လက်ဗွေရာဖြင့် ဖုန်းဖွင့်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
M5 Note • အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
1. ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ပြသထားသည့်၊ ရှင်းလင်းဖော်ပြ ထားသည့် အားလုံးသော ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်များ၊ စစ်ဆေးထားသော အချက်အလက်များ၊ ဆောင်ရွက်ချက် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် အသေးစိတ် စံချိန်စံညွှန်းများသည် ကိုးကားမှုပြုရန်အတွက်သာလျှင် ဖြစ်ပြီး၊ အပြောင်းအလဲရှိကောင်း ရှိနိုင်ပေသည်။ အားလုံးသော အချက်အလက်များသည် လက်တွေ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းလက်စွဲစာအုပ်တို့အပေါ်တွင် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။
2. သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမရှိလျှင် ဤ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိအချက်အလက်များ အားလုံးသည် Meizu ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စစ်ဆေးချက်ရလဒ်များအား ကိုယ်စားပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသည့် အခြေအနေများလက်အောက်တွင် ဒေတာ အချက်အလက်များသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲနိုင်ပေသည်။ သို့ပါသဖြင့် အသုံးပြုသူများသည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား လက်တွေ့အသုံးပြုရာတွင် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံပေါ်တွင်သာ အမှီပြုရန်လိုအပ်သည်။